मायालु जोडीलाई सुजनको भ्यालेन्टाइनको उपहार « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मायालु जोडीलाई सुजनको भ्यालेन्टाइनको उपहार
भ्यालेन्टाइन डे लाई लक्षित गर्दै गायक सुजन तिगेला लिम्बुले आफ्नो गीत ’कसम मन पर्यो’ को भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । मायालु जोडीको लागि खास मानिने दिनलाई लक्षित गर्दै प्रेमिल भाव व्यक्त गर्ने गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
गीतमा शब्द , संगीत र स्वर सुजनकै रहेको छ भने यसको भिडियोमा पनि उनि देखिएका छन् । गीतमा सुजनसंगै एलिशा राई पनि देखिएकी छिन । गीतमा लिम्बु कल्चर झल्काउने किसिमको भेषभुषा पनि प्रयोग गरिएको छ भने संगीतमा पनि त्यस किसिमका प्रयोग भएको गायक लिम्बु बताउछन् ।
यो गीत एल्बम’कालजयी २ मा संग्रहित छ । यस गीतको भिडियोमा राजिव समरको कोरियोग्राफी रहेको छ भने यसलाई अर्जुन तिवारी एण्ड टिमले छायाँकन गरेका हुन् । सुप्रिम पराजुली सम्पादक रहेको भिडियोलाई शान थापाले निर्देशन गरेका छन् ।
गायक भन्छन् ” मैले आफ्नो सांगीतिक यात्राको सुरुवात बिक्रम संवत २०५८ साल देखि नै गरेको थिए । त्यसको केहि समयपछी ’कालजयी’ एल्बम मार्फत संगीतलाई निरन्तरता दिए । त्यसमा समावेश गीत ’के सरो ब्युटी’ लाई दर्शक तथा श्रोताले रुचाइदिनु भएपछी यतिबेला ’कालजयी २ लिएर तपाइँसामु आएको छु । दर्शकको रोजाई अनुसारको भिडियो तयार गरेको जस्तो आभाष भएको छ । यो प्रणय दिवसमा यस गीतले तपाईलाई मायाको आभाष दिलाउछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।”
शान थापा , निर्देशक ( गीतले प्रेम भाव व्यक्त गर्छ यसैले पनि प्रणय दिवसकै सेरोफेरोमा सार्वजनिक गरेका छौ । गीत रमाइलो बनाउने कोशिस गरेका छौ । गीतकै भाव अनुसार यसमा सुजनजी र एलिशाजीलाई फिचरीङ गराएका छौ । गीतमा प्रेमीले प्रेमिकाको सुन्दरता र मायाको बयान गर्छन् ।
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/EZTxjKG3edg” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>
निर्मला प्रकरण: छोरीको न्यायको माग गर्दै धर्नामा बसेका निर्मलाका आमा,बुबाको स्तिथि नाजुक [भिडियो हेर्नुहोस ]
कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको तीन महिना भन्दा बढी समय
हरिवंश आचार्य एक ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएका थिए। उनको जन्म वि.सं. २०१४ कार्तिक २७ गते (सन्
तीन वर्षीय छोरा सहित दाङकी एक महिला बेपत्ता भएकी छिन्।उनी आफ्नो तीन वर्षीय छोरा सहित
सन्तोश पन्तसँग एक छिन हल्का रमाइलो [कमेडी भिडियो हेर्नुहोस ]
विसं. २०१७ सालमा काठमाडौंको नायँ बजारमा जन्मिएका हाँस्य कलाकार सन्तोष पन्त समकालीन हाँस्य कलाकारको सूचीमा